သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကြွပ်ဆတ်ဆတ်ချဉ်ငံစပ်
နံနက်ခင်းနေခြည်က ခပ်ဝေးဝေးတောင်တန်းပြာတွေပေါ်မှာ နွေးထွေးစွာ ဝေ့၀ဲကျနေသည်။ ပြူတင်းအပြင်မှ မိုးထိမြင့်မားသော ထင်းရှုးပင်များကို ငေးမောရင်း ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်ကို တစ်ဇွန်းခပ်လိုက်၊ ရေနွေးကြမ်းကို တစ်ငုံငုံလိုက်ဖြင့် နံနက်စာကို ငုံးဥတစ်ယောက် စိမ်ပြေနပြေစားနေသည်။
စားပွဲပေါ်မှ ငုံးဥ ၏ တစ်ပတ်နွမ်းလက်ကိုင်ဖုန်းလေးက ထမြည်သဖြင့် လက်တွင်ပေနေသော ဆီကို လက်သုတ်ပုဝါနှင့် ကပျာကသီ သုတ်လိုက်ပြီး ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
“မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင့်။ … သြော် ဂျီးတော်ဂွပ်၊ ငုံးဥလား.. ငုံးဥ တစ်ပတ်လောက်နေရင် ပြန်တော်ပြန်မယ် ဂျီးတော်ဂွပ်”
နံနက်စောစောစီးစီး ဟိုးမိုးပေါ်ကလာသော အထက်သံ အသံကျယ်ကြီးဖြင့် ငုံးဥ မိခင်ကြီး၏ ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်း ဂျီးတော်ဂွပ် ဖုန်းဆက်လာသည်မို့ စားလက်စ ပဲပြုတ်စေ့လေးများကို ခက်ရင်းကွနှင့် တို့ထိရင်း လေးပင်စွာဖြေလိုက်မိသည်။
“ငုံးဥကို အကူအညီ တစ်ခု တောင်းချင်လို့၊ မြန်မာပြည်က လက်ဖက် သုံးပိဿာလောက် ၀ယ်ခဲ့လို့ရမလား။ ပိုက်ဆံ ကျသလောက်ပေးမယ်”
သုံးပိဿာတော့ မရနိုင်ဘူးထင်တယ်။ ငုံးဥက မြန်မာပြည်ကို ငါးနှစ်လောက်နေမှ တစ်ခါပြန်သူမို့ မြန်မာ့အနုပညာ ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ ပန်းတိမ်၊ စတဲ့ ပန်းဆယ်မျိုးအပြင်၊ စာအုပ်အဟောင်း၊ အစုတ်၊ အသစ်၊အနှစ်တွေလဲ ၀ယ်လာဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ကအထွက်လဲ ခရီးတထောက်ရပ်ပါဦးမယ်၊ သည့်အပြင် ဆွေတော်မျိုးတော် အယောက်သုံးဆယ်အပါအ၀င်၊ အခြားသော လူကြု့မှာသူတွေအားလုံးကိုလဲ ညီညီမျှမျှ ၀ယ်လာပေးချင်သောကြောင့် တစ်ပိဿာတော့ ရအောင်ဝယ်လာပေးပါ့မယ် ဂျီးတော်ဂွပ်……. လို့ ရှည်လျားထွေပြားစွာ အသေးစိတ် မပြောလိုသော ငုံးဥ တစ်ယောက်…
“ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ် ဂျီးတော်ဂွပ်ရဲ့.. ၀ယ်ခဲ့ပေးပါမယ်၊ ပိုက်ဆံပေးဖို့ မလိုပါဘူး ဂျီးတော်ဂွပ်ရယ်..” ဟုသာ ပြန်ပြောလိုက်လေသည်။
“အေး ငုံးဥ၊ နောက်တစ်ခု သေသေချာချာမှာမယ်နော်၊ ဆီလုံးဝမပါတဲ့ လက်ဖက်ကို ၀ယ်ခဲ့ပါ။ ဟိုက ဆီတွေကို မစားရဲဘူး။ ဒီက ဆီအကောင်းစားနဲ့ ဂျီးတော်က သေသေချာချာ နှပ်ပြီးမှ စားတာ၊ ဆီလုံးဝမပါတဲ့ လက်ဖက် အသားချည်းပဲ ၀ယ်ခဲ့”
“အေး .. နောက်ပြီး ပင်ပျိုရွက်နု လို လက်ဖက်သားနော်၊ သိလား ပင်ပျိုရွက်နု”
တူတူ… တူတူ.. တူတူ..
နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲ ကျနေသော စနေနေ့ နေ့လည်ခင်းတစ်ခုတွင်၊ ငုံးဥ တစ်ယောက် မြန်မာပြည်မှ ဆွေတော်မျိုးတော်၊ သူငယ်ချင်းတော်များ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ပြီး ပေးလိုက်သော၊ ငါကျည်းခြောက်ကြော်၊ မျှစ်ချဉ်ပေါင်ကြော်၊ မြန်မာ့ပဲပြုတ်ကြော်၊ ငါးရံ့ခြောက်ကြော်၊ စသော အကြော်အလှော်ပေါင်းများစွာကို တို့ကနန်းဆိတ်ကနန်း မြည်းရင်း အရသာခံကြည့်နေခိုက် နံရံပေါ်က ဖုန်းက မြည်လာပါသည်။
“ငုံးဥလားဟေ့.. ပြန်ရောက်ပြီကြားလို့၊ အခု ဂျီးတော်လမ်းကနေခေါ်နေတာ၊ ဂျီးတော်မှာလိုက်တဲ့ လက်ဖက်ပါတယ်မဟုတ်လား၊ ဂျီးတော် အခု ၀င်ယူလိုက်မယ်”
ပါးစပ်ထဲက ပဲပြုတ်ကို အမြန်မြိုချ၊ ဆီပေနေသော နှုတ်ခမ်းကို ပေါင်ပေါ်က လက်သုတ်ပုဝါနှင့် အမြန်သုတ်ပြီး၊ “နေ့လည်စာ စားနေချိန်မို့ နောက်မှလာပါ၊ သို့မဟုတ် နောက်မှ ငုံးဥတို့ လာပို့ပါမည်” ဟု အနောက်ဆန်ဆန် မပြောတော့ဘဲ၊ ထုံးစံအတိုင်း “ဟုတ်ကဲ့” ချရန် ပါးစပ်ဟရုံရှိသေးသည်။ ဂျီးတော်ဂွပ်က ဖုန်းချသွားပေပြီ။
“ဂျီးတော်ဂွပ် လာပါ.. ထိုင်ပါ။ ဂျီးတော်ဂွပ်မှာလိုက်တဲ့ လက်ဖက်တွေ ဒီမှာပါ”
“အို.. ပိုက်ဆံပေးဖို့ မလိုပါဘူးဂျီးတော်ဂွပ်ရဲ့၊ သုံးပိဿာတော့ မသယ်နိုင်လို့ ဂျီးတော်ဂွပ်အတွက် တစ်ပိဿာ ၀ယ်ခဲ့ပေးတယ်”
“ရှင်.. ဒါက ငုံးဥကြိုက်လို့ ၀ယ်လာတဲ့ ချဉ်၊ငံ၊စပ် လက်ဖက်ထုတ်လေးတွေပါ။ ဂျီးတော်ဂွပ်ကြိုက်ရင်ယူသွားလေ၊ သြော် ဂျီးတော်ဂွပ် သား၊သမီးတွေက ချဉ်၊ငံ၊စပ်ကြိုက်တယ်လား၊ ယူပါ။ ငုံးဥမှာကျန်ပါသေးတယ်”
တယ်လီဖုန်းသံကို ကြားကတည်းက ငုံးဥ မျက်ခုံးများက မသိမသာလှုပ်နေသည်။
“ငုံးဥ လားဟေ့၊ ငုံးဥဆီက ယူလာတဲ့ ချဉ်ငံစပ် လက်ဖက်ထုတ် သေးသေးလေးတွေလေ၊ ငုံးဥတို့တော့ ဘယ်မှာသိမ်းလဲ မသိဘူး။ ဒီမှာတော့ ဂျပ်ခဲကြီးတွေဖြစ်နေတယ်”
မင်္ဂလာပါဟုတောင် နှုတ်မဆက်ရသေးခင် ဂျီးတော်ဂွပ်၏ ၀ရုန်းသုံးကား စကားပြောသံက ဖုန်းထဲမှ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။
“အေး..မပြောဘူးလား မြန်မာပြည်က ဆီတွေက မကောင်းပါဘူးလို့”
“ဆီကတော့ နဲနဲတော့ ခဲမှာပေါ့ ဂျီးတော်ရယ်… ငုံးဥတို့တော့ ခဲနေလဲ နွှေးစားလိုက်တာပဲ ဂျီးတော်ရဲ့”
“အေး.. ဂျီးတော်တော့ မသိဘူး။ ငုံးဥတို့ ဘယ်မှာသိမ်းလဲ လက်ဖက်ကို”
“ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်တဲ့ အထုတ်လဲ ထည့်တယ်၊ အခဲခန်းထဲလည်း ထည့်တဲ့အထုတ်ထည့်တယ်။ အပြင်မှာ room temperature မှာ ထားတဲ့ အထုတ်တွေလဲ ထားတယ်”
“ဟိုမှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေကိုမှာလိုက်တာပဲ ဂျီးတော်။ သူတို့ဈေးဝိုင်းဝယ်ပေးတာ”
“ဒီလောက်ခဲစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်လဲ ခဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး”
“ဒါပေမယ့် ဂျီးတော်.. ရေရဲ့ရေခဲအမှတ်နဲ့ ဆီရဲ့ ရေခဲအမှတ် မတူ….”
“အေး.. တူတာမတူတာထက်၊ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတာနဲ့ ဒီလိုဂျပ်ခဲကြီးမဖြစ်သင့်ဘူး”
“အေး ဒီမှာ ဂျပ်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ဂျီးတော်သုံးခါလောက်ပြောပြီးပြီလေ၊ မစားရဲရင် နွှင့်ပစ်လိုက်ပါ”
ဒါကတော့ ရင်ထဲကပြောသော စကားသံသာဖြစ်ပါသည်။
“ဒီမှာ ငုံးဥ ကို ဂျီးတော် တစ်ခု အကြံပေးမယ်။ နောက်တစ်ခါ မြန်မာပြည်က စားစရာတွေဝယ်ရင် အကောင်းစားဆိုင်တွေကမှ ၀ယ်… ဒီလို ဆိုင်စုတ်တွေကနေ မ၀ယ်နဲ့။ ဆီတွေကမသန့်၊ စားစရာတွေက မသန့်”
“ဂျီးတော်… ငုံးဥ အနေနဲ့ ဘယ်ဟာ ဆိုင်ကောင်း၊ ဘယ်ဟာဆိုင်စုတ်ဆိုတာ ခွဲပြီး မသိပါဘူး။ ဟိုမှာဈေးလဲ မ၀ယ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေ ၀ိုင်းဝယ်ပေးတာ… မစားရဲရင်လဲ နွှင့်ပစ်လိုက်ပါတော့ ဂျီးတော်ရယ်”
သည်းခံနိုင်မှု အဆုံးတွင် ခပ်ဖြေးဖြေးပြောပြီး ငုံးဥ စိတ်ပျက်စွာ ဖုန်းကိုချလိုက်သည်။
တစ်ကယ်တော့ ဂျီးတော်ဂွပ်သည် ငုံးဥ မိခင်၏ သူငယ်ချင်းဆိုသော်လည်း၊ ငုံးဥနှင့် ညစာစားပွဲများတွင်တစ်ခါတစ်ရံမှ တွေ့သဖြင့်၊ ရံဖန်ရံခါ မှ စကားပြောဖူးသူဖြစ်ပါသည်။ ငုံးဥသည် သူမ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပညာတတ်ဆိုသူ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းများအချို့၏၊ မြန်မာပြည်ကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောဆိုနေပုံများကို ကြားရဖန်များတော့၊ မြန်မာပြည်မှ အခြေခံပညာကို ရယူလာပြီး၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ပညာဆက်သင်၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်လာပြီး၊ အခြေကျ အနေလှကာမှ၊ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်အပုတ်ချနေသော လက်တွေ့မပါ၊ လေထန်ထန် ဂုဏ်သရေရှိ စကားဝိုင်းများကို စိတ်ပျက်သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
မိမိရောက်ရှိလာသော တိုင်းပြည်တွေ၏ ဂုဏ်ရှိန်တွေနဲ့ မိမိပါ မြင့်မားနေပြီဟု သတ်မှတ်လိုက်ကြသည်ဆိုလျှင်လည်း ငုံးဥအနေနှင့် ဘာမျှမပြောလိုပါ။ တစ်ကယ်တော့ အင်တာနက်များပေါ်တွင်၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းများကို အလျှံပယ် ဖတ်ရှုနိုင်သည်မှန်သော်လည်း၊ သတင်းတို့၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း၊ သတင်းမှန်ရရင်ကြိုးစားရေးသားကြသော်လည်း ethos, pathos, fallacies, media bias များ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဖုံးလွှမ်းနေတတ်သဖြင့်၊ နေရာဒေသတစ်ခုလက်ရှိအခြေအနေအဖြစ်မှန်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ထိုနေရာနှင့် အကျွမ်းဝင်စွာ မရောက်ရှိ မဆက်ဆံရပါလျှင်၊ စာတွေ့တွေနှင့် လက်တွေ့ဘ၀များသည် ဆီနှင့်ရေကဲ့သို့ ကွာဟလှကြောင်း ငုံးဥကိုယ်တိုင် ရင်သပ်ရှုမော မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကြားရသော သတင်းများသည် အရပ်ဒေသလေးတစ်ခု၏ အဖြစ်အပျက်ကို ထိုအချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်း ကိုယ်စားပြု မှန်ကန်နိုင်သော်လည်း၊ ဒေသကြီးတစ်ခုလုံးအားလည်းကောင်း၊ အချိန်ကာလရှည်ကြီးတစ်ခုအားလည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုမနေပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရလျှင် မြန်မာပြည်ကို တစ်နှစ်ခန့် ပြန်မရောက်ပြီဆိုလျှင်ပင် ထိုသူသည် အခြေအနေမှန်မှ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အလှမ်းကွာဝေးနေသူသာ ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်းပြည်နှင့် ဝေးကွာနေသော၊ တီဘီ၊ AIDS စသောရောဂါများကူးလာမည်စိုးသဖြင့်၊ မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ်ပြန်မည့်အစား ဥရောပတိုင်းပြည်တွေကိုသာ အလည်အပတ်သွားရန် စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိသော၊ စက်မှုမထွန်းကားတိုင်း အသိဥာဏ်နိမ့်ကျ၊ အောက်တန်းကျသည့် လူမျိုးများနေထိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သော၊ မိမိမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည့် သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည် လေးကို မိမိလက်ရှိနေထိုင်နေသော တိုးတက်ပြီးတိုင်းပြည်များနှင့် ယှဉ်ထိုး အထင်သေးသော၊ မိမိ၏ သားသမီးများကို မြန်မာပြည်တွင်းမှ လူများနှင့် အကြောင်းပါမည်ကို အလွန်စိုးရိမ်သော၊ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိတာလေးနှင့် ရုန်းကန်စားသောက်နေရသော၊ ထွက်ပေါက်မဲ့ခံစားနေရသောသူများကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့နှိမ်ပြီး ပြောသော ငုံးဥ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဂျီးတော်ဂွပ်အပါအ၀င် အချို့သော သူများ၏ စကားလုံးများကို အလွန်စိတ်ပျက်နေသော ငုံးဥတစ်ယောက်…
ထို.. ဂျီးတော်ဂွပ်အား …
ပြောင်းဖူးဆီဟာ -၂၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာခဲတယ်၊ နေကြာဆီဟာ -၁၇ဒီဂရီမှာခဲတယ်၊ သံလွင်ဆီဟာ -၆ဒီဂရီမှာခဲတယ်၊ နှမ်းဆီဟာ -၆ဒီဂရီမှာခဲတယ်၊ မြေပဲဆီဟာ ၃ဒီဂရီမှာခဲတယ်၊ palm oil က ၂၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာခဲတယ်၊ အုန်းဆီကတော့ ၂၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာခဲတယ်။ မြန်မာပြည်က ၀ယ်လာတဲ့ ဒီလက်ဖက်ထဲကဆီဟာ စားအုန်းသုံးထားရင် အပူချိန် ၂၄၊ ၂၅လောက်မှာကို ခဲနေပြီ။ ပူတဲ့တိုင်းပြည်က ပစ္စည်းမို့ ဆီတွေကို winternization တွေဘာတွေလဲ ဘယ်လုပ်ထားပါ့မလဲ၊ သဘာဝသစ်ပင်ထဲက ထွက်တဲ့ဆီဟာ ဥပမာ နေကြာဆီ အတူတူတောင် အပင်အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ရေခဲအမှတ် မတူနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး ကနေဒါက အိမ်တွေဟာ များသောအားဖြင့် အ်ိမ်တွင်းအပူချိန် ၂၀ နှင့် ၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်းမှာ ထားလေ့ရှိတော့ ဒီလက်ဖက်လေးတွေ ရေခဲသေတ္တာထဲမပြောနဲ့ အပြင်မှာထားရင်တောင် ဆီခဲနေလောက်ပြီပေါ့……. ။ ဆိုင်စုတ်က၀ယ်တဲ့ လက်ဖက်စုတ်မို့ခဲနေရခြင်းမဟုတ်ရပါ…
လို့.. ငုံးဥ ရှင်းမပြလိုတော့ပါ။
ငုံးဥ ဘာမျှ မပြောလိုတော့ပါ။
ငုံးဥ နီးရာ လက်ဖက်တစ်ထုတ်ကိုသာ ဖောက်ပြီး အသံမြည်အောင် ၀ါးစားနေလိုက်ပါတော့လေသည်။
အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပညာတတ်ဆိုသူ၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းများအချို့၏၊ မြန်မာပြည်ကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောဆိုနေပုံများကို ကြားရဖန်များတော့၊ မြန်မာပြည်မှ အခြေခံပညာကို ရယူလာပြီး၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ပညာဆက်သင်၊ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်လာပြီး၊ အခြေကျ အနေကျကာမှ၊ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်အပုတ်ချနေသော လက်တွေ့မပါ၊ လေထန်ထန် ဂုဏ်သရေရှိ စကားဝိုင်းများကို စိတ်ပျက်သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
Comment by ဒေါင်မင်း — January 16, 2009 @ 1:13 am
လူကြုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်ရင်နာလာပုံရတယ်… :P:P
Comment by sin dan lar — January 16, 2009 @ 2:23 am
မလေး မြန်မာပြည်ကပြန်လာပြီး ရေးစရာတွေ အများကြီးပဲ မွန်တို့မလေးစာတွေ တဝကြီးဖတ်ရတာပေါ့
ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေထဲက သြချရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပဲနော် မချိပြုံးရော လှောင်ပြုံးပါပြုံးရတယ်
Comment by မွန် — January 16, 2009 @ 4:25 am
ဟုတ်ပ အမရေ…. အဲလိုလူတွေအများကြီးပဲ…. မြန်မာပြည်ကလည်း… မတိုးတက်ပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံးဆင်းရဲအောက်တန်းကျ နိမ့်ကျနေတဲ့သူတွေပဲရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး… ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာတောင် ဂျပ်ခဲကြီးဖြစ်နေတယ်…
Comment by Phu Phu — January 16, 2009 @ 5:32 am
ဟုတ်ကဲ… အဲလိုလူတွေအများကြီးပဲမရေ.. မြန်မာပြည်ကမတိုးတက်ဘူးဆိုပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံးကလူတွေက ဆင်းရဲအောက်တန်းကျနိမ့်ကျနေတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ကြပါဘူး… ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာတောင်ဂျပ်ခဲကြီးဖြစ်လာတယ်
Comment by Phu Phu — January 16, 2009 @ 5:35 am
ဒေါင်းမင်း .. မလေး လက်ဖက်က ဂျပ်ခဲကြီးနော်.. ဟွန်းဟွန်း
sin dan lar ရေးလိုက်သမျှ ကော့မန့်တွေက မလေးကို ရယ်မောစေတယ်။ ဘလော့ဂ်ရှိလားဟင်၊ ဖတ်ချင်တယ်ညီမဘလော့ဂ်ကို
မွန် .. ခံစားချက်တွေများလာလို့ပါ မွန်ရယ်..
Phu Phu … မလေးလဲ ရေးရင်း ဂျပ်ခဲကြီးကို ဖြစ်လို့
Comment by မလေး — January 16, 2009 @ 12:54 pm
ပုံရိပ်ကတော့ အကုန်စားတာပဲ။ စုတ်လား မစုတ်လားတော့ မသိဘူး။ စားလို့တော့ ကောင်းသလား မမေးနဲ့။ မစားရဲတော့လည်း ကိုယ်ပိုစားရတာပေါ့။
Comment by ပုံရိပ် — January 16, 2009 @ 6:39 pm
Thankalot to get to read, it’sanature of some .
Hope to see your more Naw.
Comment by mgmoekhin — January 16, 2009 @ 7:57 pm |
ဟုတ်ပါ့ဗျာ အဲ့ဂျီးတော် ကြီးက မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ အလကားလည်း စားရသေးတယ် ဂျပ်ခဲ ဂျပ်ခဲနဲ့ သေလောက်အောင်ထည့်ပြောနေတာ ။ ငုံးဥ ပြောတာ နည်းတောင် နည်းသေးတယ် ။ ရှင်းမပြနဲ့ ရှင်းမပြနဲ့ လေကုန်တယ်နောက်ဆို ဖုန်းခေါ်ပြီး ငုံးဥလားလို့ မေးရင် “မဟုတ်ဘူးဖုန်းမှားနေတယ်ရှင့် ကျမဘဲဥပါ” လို့ပြောပြီး ချလိုက် အဲ့တာ အေးကော
Comment by မောင်မျိုး — January 16, 2009 @ 9:15 pm
အပေါ်ရံကြည့်ပြီး ဂျပ်ခဲကြီးလို့ ပြောတဲ့ ဂျီးတော်ဂွပ်… အဲဒီဂျပ်ခဲအရသာလေး လျှာပေါ်ရောက်သွားရင် မောင်ကျန် တတို့ တို့ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်သေးတယ်… ဇီးသီးကို ဘာသီးလဲလို့ မေးတဲ့ မဗျိုင်းတောင် လူကွယ်ရာမှာ ဇီးသီးခိုးစားနေမှာပါ အိမ့်ရယ်… အဲလောက်တောင် မေ့တတ်ရင် လဘက်ကို ပါမေ့လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်… တို့ လဲ အဲလို လူတွေကို စိတ်ပျက်တယ်… အိမ့်ကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်…
Comment by တန်ခူး — January 17, 2009 @ 9:21 am
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကြွပ်ဆတ်ဆတ်ချဉ်ငံစပ် ပါလားငုံးဥရယ်
Comment by ကိုသားငယ် — January 17, 2009 @ 10:33 am
Comment by naw — January 19, 2009 @ 12:31 am
Comment by koala — January 19, 2009 @ 9:04 am
ပုံရိပ် .. ဟုတ်တယ်.. ဒါကြောင့် မလေးချည်းပဲ စားပစ်လိုက်တာ
မောင်မိုးခင် .. ဟုတ်ကဲ့ ကိုမောင်မိုးခင်.
မောင်မျိုး .. ဂျီးတော် ထပ်မဆက်ပါစေနဲ့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ် မောင်လေးရေ..
တန်ခူး .. အဲဒီဂျီးတော်က မလေး မေ့မေ့ကိုတောင် ဂျပ်ခဲအကြောင်း ခုထိမေးတုန်းတဲ့ ခွိ
ကိုသားငယ် .. ၂ယောက်လုံးကို သတိရပါတယ်
နော် .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
koala .. သနပ်ခါးကတော့ အတုံးတွေသယ်ရင် “unprocessed plant products” ထဲပါနေတော့ ယူအက်စ်အ၀င် တရားမ၀င်ဘူးထင်တယ်ညီမ။ ကြိတ်ပြီးသားတို့ ဗူးနဲ့အခဲတို့တော့ ရနိုင်တယ်။ ကျောက်ပန်းချီတွေ လက်ဝတ်ရတနာကတော့ မြန်မာအထွက်ကော ဒီဘက်အ၀င်ကော တရားဝင် ဘောက်ချာနဲ့ဆို ဘာမှပြသနာမရှိပါဘူး။ ဒါလဲ နိုင်ငံခြားသားလား၊ မြန်မာနိုင်ငံသားလားအပေါ်မှာ မူတည်သေးတယ်ထင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် US Custom & Immigration Website မှာ လေ့လာကြည့်ပါညီမ။ ကနေဒါနဲ့ ယူအက်စ်ကလဲ regulations တွေ မတူပြန်ဘူး။ စားစရာတွေကတော့ meat & meat products တွေ ကို ယူအက်စ်ကော၊ ကနေဒါကော တင်းကျပ်တယ်။ တရားမ၀င်ဘူးထင်ရင် သူတို့ နွှင့်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ချက်ပြီး၊ ပြုတ်ပြီးသား ဆိုရင်တော့ ပြသနာမရှိလောက်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်က အထွက်တော့ မလေးကတော့ ပန်းပု၊ပန်းချီ၊ လက်ဖက်၊ မုန့်ဟင်းခါးထုတ် အကုန်သယ်တာပဲ။ ဘောက်ချာတွေနဲ့ အကုန်ပြတယ်။ တစ်ခါမှ လေယာဉ်ကွင်းမှာ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:19 PM
အင်း ငုံးဥကိုေုက်ာစားရရင် ဘာဆီနှင့်ကြော်ရင် ကောင်းမလဲ ဟိဟိ
ဟုတ်တယ်အစ်မ လူကြုံကိစ္စကတော့ အားနာစရာလည်းကောင်း မျက်နှာလည်းပူစရာ.။ ယူသွားပေးရအခက် ငြင်းရအခက်...။ ၁၂ ရက်နေ့လောက်တည်းက နေမကောင်းဖြစ်ပြီး မလှုပ်နိုင်တာ ခုမှသက်သာလို့ ပဲလာလည်နိုင်တယ်..။